अब पार्टीमा ६०-४० को धन्दा चलाउनुहुँदैनः गगन थापा - मधेश प्रदेश डटकम
December 17, 2021 | 146 पटक हेरीएकाे
काठमाडौं, २ पुस । नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगनकुमार थापाले अब पार्टीमा ६०-४० को धन्दा चलाउन नहुने बताएका छन् ।
हिजो राति प्राइम टाइम टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले भने, “नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पराजित डा. शेखर कोइरालाले ४० प्रतिशत मतको भागबन्डा नमाग्ने स्पष्ट भनिसक्नुभएको छ । तर हाम्रो पार्टीको विगत हेर्दा अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा सुशील कोइरालासँग भाग मागेर बस्नुभयो । उहाँलाई पनि अर्को महाधिवेशनमा अर्को पराजित सभापतिले भाग मागेकै हो ।”
कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री थापाले थपे, “हामीले भागबन्डाबाट आजित भएर नै पार्टीभित्र जेहाद छेडेको हो । अब शेरबहादुर देउवा पनि ६० प्रतिशतको मात्र सभापति होइन । उहाँ सबैको सभापति हो । त्यसैले उहाँले गुटको भेला गर्नुभएन । शेखर कोइरालाले ४० प्रतिशतको धन्दा नचलाउने, गुटको बैठक नबोलाउने र गुटको आधारमा लेनदेन नगर्ने भनेपछि सभापतिले चाहिँ भागबन्डा तोड्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने नै अहिलेको प्रमुख कुरा हो । अबको हाम्रो काम विधानको शासन कायम गराउने हो । विधान सबैले अक्षरश मान्ने हो । सभापतिले सबैलाई जिम्मेवारी र न्याय दिनुपर्यो भन्ने हो ।”
पार्टी सभापतिमा देउवालाई सफल बनाउने आफ्नो इमानदार प्रयास रहने उनले बताए । उनले भने, “यो देउवाको लास्ट इनिङ हो । हामी उहाँलाई मदत पनि गछौंं, दबाब पनि दिन्छौं । अबको पहिलो काम वडादेखि केन्द्रसम्म भएका निर्वाचनमा लागेको घाउ पुर्ने हो । म मेरो जनीतिक लाइन ‘सम्पन्न नेपाली, सम्मानित नेपाली कार्यक्रम’ पार्टीमा प्रस्तुत गर्छु ।”
डा. शेखर कोइरालालाई सभापति बनाउन नसक्नुमा खेद भए पनि अब पुरानो कुरा बिर्सेर अघि बढ्ने उनले बताए । उनले भने, “इमानदारीपूर्वक भन्नु पर्दा मैले अघिल्लो र यसपल्टका दुवै महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई मत हालेको होइन । मैले पार्टीको नेतृत्व बदल्न चाहेको हो । तर हामीले नेतृत्व बदल्न सकेनौं । प्रयास गर्यौं । त्यसमा आंशिक सफलता मिलेको छ । अब उहाँ पनि सबैको सभापति हो, म पनि सबैको महामन्त्री हुँ । अब हामी मिलेर जानुको विकल्प छैन । सभापतिसँग सहकार्य र संघर्षको सम्बन्ध हुन्छ । कुनै पनि बहानामा विधान बाहिर जाने कुरा स्वीकार्य हुन्न ।”
नेपाली कांग्रेसलाई एक्लै चुनाव लडेर बहुमतको सरकार बनाउनेमै आफ्नो ध्यान रहने नेता थापाले बताए । उनले भने, “अब नेपाली कांग्रेसलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ कि सबै दलको गठबन्धन हुँदा पनि कांग्रेसलाई कसैले हराउन नसकोस् । नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको प्रतिकूल अवस्थामा पनि ३० प्रतिशत मत पाएको छ । अब त्यसलाई ४५ प्रतिशत बनाउन सक्नुपर्छ । कुनै बेला कांग्रेसले ४० प्रतिशत मत पाएको थियो । नेतृत्व लोकप्रिय थियो । नेतृत्वलाई पिताजस्तो मान्थ्यो । अब हामीले १२, १५ लख नयाँ मतदातालाई विश्वास सिर्जना गर्न सक्यौं भने मात्र बहुमतको सरकार सुनिश्चित हुन्छ ।”
आगामी निर्वाचनमा गगन थापालाई पार्टीले भावी प्रधानमन्त्री भनेर निर्वाचनमा जाने स्थिति छ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, हो, “नेपाली कांग्रेस बेला बेलामा अब यो प्रधानमन्त्री भनेर चुनावमा गएको इतिहास छ । पार्टीले आवश्यकता हेरिकन कसको नेतृत्वमा पाँच वर्षमा कस्तो सरकार चलाउने भनेर जान सक्ने अवस्था छ ।”
उनले आफूलाई मत नदिने १५ सय मतदाताको मन जित्ने गरी काम गर्ने बताए । उनले थपे, “मलाई १५ सय साथीले मत दिनुभएन, उहाँहरुको पनि मन जित्नु छ । अब तुरुन्त नीति अधिवेशन गर्नुपर्छ । हामी चार वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी बस्दैनौं । कांग्रेसको महामन्त्रीको रुपमा राजनीतिक लाइनको प्रस्तावक, चुस्त दुरुस्त संगठन बनाउने र कुशल व्यवस्थापकका रुपमा रहने मेरो प्रतिबद्धता छ ।”
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मामात्र नभएर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङसँग मिलेर काम गर्न कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । उनले भने, “सांसद भएँ, मन्त्री भएँ, महामन्त्री भएँ । मेरा पनि केही सीमा छन् । हिजोको भूमिकामा त मिलेर काम गर्यौं भने अब किन नगर्ने ? पूर्णबहादुर, धनराज, विश्वप्रकाशसँग मिलेर जान केही समस्या छैन ।”